यस्ता विशेषता भएका मान्छे हुन्छन् भाग्यमानी, तपाईमा छ त ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यस्ता विशेषता भएका मान्छे हुन्छन् भाग्यमानी, तपाईमा छ त ?
2,427 1 minute read
काठमाडौँ । हरेक मानिसको शरीरिक बनावट फरक हुन्छ । फरक–फरक बनावट र संकेतले व्यक्तिको विशेषताबारे पनि बताइरहेको हुन्छ । विशेष गरी समुद्रशास्त्रले यस्ता कुराको विशेषता बताइरहेको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा निम्न कुराहरु बताउँछन् ।
समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको दाँतमाथि दाँत खप्टिएको हुन्छ उनीहरु भाग्यमानी हुन्छन् । यसका साथै यस्ता व्यक्ति असल र मित्रहरुलाई सधैँ साथ दिने खालका हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो भाग्यको साथले नै अघि बढेका हुन्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **